यस्ता छन् इन्टरनेट स्लो हुनुका ५ मुख्य कारणहरु - सिम्रिक खबर
यस्ता छन् इन्टरनेट स्लो हुनुका ५ मुख्य कारणहरु
इन्टरनेट सेवालाई लिएर ग्राहकहरुमा कहिल्यै सन्तुष्टि पलाएको देखिँदैन । यो असन्तुष्टि अझ निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमाथि नकरात्मक टिप्पणी तथा गाली गलौज गरिएका अनेकौं पोस्टहरु देखा परिरहेका हुन्छन् । वास्तमा इन्टरनेट विभिन्न कारणले स्लो हुने गर्छ । यसबारे हरेक प्रयोगकर्ता चनाखो हुन जरुरी हुन्छ ।
आज हामी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट स्लो हुने मुख्य पाँच कारणबारे चर्चा गर्दैछौं ।
१. तपाईंको वाईफाईले व्यापक कभरेज दिन्छ तर, यसले तपाईंको कनेक्सन पर्फमेन्सलाई कमजोर बनाउन सक्छ । दुरीले तपाईंको वाईफाई सिग्नललाई घटाइदिन्छ र घरको सिलिङ र भित्तालाई छेडेर जान वाईफाई सिग्नललाई समस्या पर्दछ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउन तपाईंले आफ्नो डिभाइसलाई इथरनेट केबल प्रयोग गरेर आफ्नो राउटरसँग जोड्न सक्नुहुन्छ । अब स्पीड टेस्ट गर्नुहोस् र देखिने परिणामबाट तपाईं पक्कै खुसी हुनुहुनेछ। यसबाहेक राउटरलाई आफ्नो घरको केन्द्रमा राखेर पनि तपाईंले वाईफाई पर्फमेन्सलाई सुधार गर्नसक्नुहुन्छ । यसलाई खुल्ला, ओरालो पोजिसनमा राख्दा राम्रो हुन्छ । तर यसलाई साँघुरो ठाउँमा लुकाएर कहिल्यै नराख्नुहोस् ।
२. इन्टरनेट शेयर गरेर प्रयोग गर्नको लागि हो । यसैले तपाईंले यसलाई आफ्नो साथीभाइ र परिवारसँग शेयर गर्नुहुन्छ । तर शेयर गर्दै गर्दा नभुल्नुहोला कि वाईफाई कतिवटा डिभाइसमा बाढिने भनेर त्यसको आफ्नै सीमितता हुन्छ । जब तपाईंको ब्रोडब्याण्ड धेरै जनामाझ शेयर भइरहेको हुन्छ, तब यो इन्टरनेट विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको हुन्छ । जस्तै भिडियो स्ट्रिमिङ, अनलाइन गेमिङ आदि । यसले धेरै ब्याण्डविथ खपत गर्दछ । परिणामतस् वाईफाईको समग्र पर्फमेन्समा नै असर पर्दछ ।
तर फाइबर ब्रोडब्याण्ड प्याकेजले धेरै कनेक्सनलाई राम्रोसँग सपोर्ट गर्न सक्दछ । यसले स्ट्याण्डर्ड ब्रोडब्याण्ड एडीएसएलभन्दा राम्रोसँग काम गर्दछ । यसले स्पीड र समग्र पर्फमेन्स कुनैलाई पनि हानी पर्याउँदैन ।
३. तपाईको वाईफाईकको सिंग्नललाई असर गरेर कनेक्सन पर्फमेन्सलाई कमजोर बनाउने तत्व दुरी मात्र होइन राउटर राखेको लोकेसन पनि अर्को कारण हो । यसबाहेक नजिकको टेलिफोन एक्सचेन्ज र एक्टिभ स्ट्रिट डिस्ट्रिब्यूसन क्याबिनेटसँगको दुरी पनि अर्को तत्व हो । यी प्वाइन्टहरुमा तपाईको जानकारीहरु अनलाइन एक्सेस गर्न सकिन्छ वा इन्टरनेटमा अपलोड गर्न सकिन्छ । यी प्वाइन्टबाट जति टाढा जानुहुन्छ तपाई्को कनेक्सन त्यति नै कमजोर हुन्छ । एउटा क्विक वेब सर्चले तपाईंको नजिकको टेलिफोन एक्सचेन्ज लोकेट छ भनेर देख्न सकिन्छ ।
जब तपाईंको क्षेत्र वा सडकमा धेरै मानिसहरु अनलाइनमा हुन्छन् तब नेटवर्कको डिमाण्ड पनि ह्वात्तै बढ्छ । यस्तो बेला स्पीडमा गडबडी हुनसक्छ । केही ब्रोडब्याण्ड प्रदायकले भने नेटवर्क युसेजमै सिधै नियन्त्रण कायम गर्छन् । यसरी नियन्त्रण गर्दा इन्टरनेट गतिविधि सीमित हुन्छ । जसले अन्य प्रयोगकर्तामा पनि इन्टरनेट एक्सेस समानरुपमा पुग्न सक्छ । यसलाई ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भनिन्छ । यसले सबै प्रयोगकर्तामा समान रुपमा इन्टरनेट खपत गर्न सहयोग गर्दछ ।
५. कहिलेकाहिँ तपाईंको सुस्त ब्रोडब्याण्डको मुख्य कारण नै तपाईंको सेवा प्रदायक हुन सक्छ । तपाईंको प्रोभाइडरको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट नीतिले पनि तपाईंको युसेजलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ । यदि यस्तो हो भने यो समस्यालाई हल गर्ने उपाय तपाईसँग हुँदैन । यस्तो बेला आफ्नो प्रदायककहाँ जानुहोस् र सम्भावित समाधानको लागि अनुरोध गर्नुहोस् । यसो गर्दा पनि पुरानो सेवाप्रदायकसँग सन्तुष्ट हुनसक्नु भएन भने अर्को सेवाप्रदायककहाँ जान तपाईं स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।